जनप्रतिनिधि : २ वर्ष पनि नपुग्दै प्रमुखलाई पुन: नयाँ गाडी, वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल ! - जनप्रतिनिधि : २ वर्ष पनि नपुग्दै प्रमुखलाई पुन: नयाँ गाडी, वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल !
जनप्रतिनिधि : २ वर्ष पनि नपुग्दै प्रमुखलाई पुन: नयाँ गाडी, वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ आश्विन, 02:22:37 AM
काठमाडौं । सबैजसो मञ्चमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको गुनासो गर्न छाडदैनन् ।
निर्वाचित भएसँगै केही स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट गाडी खरिद गरेका थिए। २ वर्ष पनि नपुग्दै पुनस् नयाँ गाडी खरिदको तयारी सुरु भएको छ।
विकास निर्माणका लागि सवारीसाधन अनिवार्य भन्दै खरिदका लागि ५ नगर र ६ गाउँपालिका सबैले रकम विनियोजन गरेको जनाएका छन्।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले एउटा गाडी, प्रत्येक वडा र नगर कार्यपालिकाका लागि समेत गरी १२ मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। ३ नम्बर वडा समितिमा २ मोटरसाइकल छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार गाउँ कार्यपालिकामा थप अर्को गाडी आवश्यक छ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
२०७५, १७ आश्विन, 02:22:37 AM